ဘယ်တုန်းကများ ရှိုက်ငိုဖူးလို့လဲ ...
ဆောင်း ... ည .... တွေ
ဟယ်လို ... ကြားရလား
ဟိုး ......... အတိတ်တွေထဲကနေ
ငါ့ သက်ပြင်းချသံ တိုးတိုးလေး
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 3:30 PM
အစ်မ ယမင်း က Tag ထားတော့လည်း ရေးရတော့မှာပေါ့လေ။ တော်ကြာ သွား... ခင်စရာလည်း မကောင်းဘူးဆိုပြီး အပေါင်းအသင်း မလုပ်တော့ရင် မိတ်ဆွေလျော့သွားဦးမယ်... နော။
Ten Things ဆိုပေမယ့် တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင် ကျွန်တော့်မှာ မကောင်းဘူးထင်ရတဲ့ အကျင့်က ဆယ်ခုမကဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ စဉ်းစားရသမျှ ရေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။
၁။နေ့နဲ့ညမှားနေတာ (မိုးလင်းခါနီးမှအိပ်ပြီး ၁၂၊ ၁ လောက်မှထတယ်)
အား... တကယ်တော့ စဉ်းစားရတာ အတော်ခက်တယ်။ ပြောပါတယ်... ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးပါတယ်လို့။ မကောင်းဘူးထင်ရပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်နေရတာ တကယ်ခက်ပါတယ်။
လူဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မမြင်ဆုံးပဲလေ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း ဒီလောက်ပဲရေးတတ်ပါတယ်...။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:35 PM
Labels: Tag comments (2)
ကျွန်တော်ကြားဖူးတာပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မျက်စိနဲ့ မမြင်ခဲ့ရပေမယ့် အစ်ကိုတော် နောင်တော်များ ပြောပြကြလို့ သိရတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်တုန်းက ဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေ ပြည်သူတွေကို စစ်တပ်က ရက်ရက်စက်စက် သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ဖြိုခွင်းပြီး သေတဲ့အလောင်းတွေကို ညတွေမှာ ဧရာဝတီမြစ်ထဲ ပစ်ချမျှောခဲ့သတဲ့။
အဲဒီအချိန်က ငယ်သေးလို့ သေချာမသိခဲ့ပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် ခံစားတတ်ပြီ။ နာကြည်းတတ်ပါပြီ။ စစ်အစိုးရရဲ့ ရက်စက်မှုကိုလည်း မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ခဲ့ဖူးပြီ။ ထားလိုက်ပါတော့...။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဆရာမြင့်မိုးအောင်ရေးပြီး ကိုလေးဖြူဆိုခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီညများ သီချင်းအကြောင်းပါ။ ဇာတ်ဝင်သီချင်းမို့ ဇာတ်ကားနဲ့လိုက်ဖက်အောင် ရေးသားသီဆိုထားတယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော် နားထောင်လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဒီထက်မက ပိုခံစားမိပါတယ်။
ဧရာဝတီညများကို နားထောင်ရင်း အပေါ်မှာရေးခဲ့သလို ကျွန်တော်ကြားဖူးထားတဲ့ အကြောင်းတွေ မြင်ယောင်လာမိတယ်။ ကိုလေးဖြူရဲ့ နာနာကြည်းကြည်း ကြေကြေကွဲကွဲနဲ့ ဆိုလိုက်တဲ့ အသံတွေကိုက တကယ့်ဖြစ်ရပ်တွေကို ပြန်ပြောပြနေတဲ့ အတိုင်းပဲ။ ပြီးတော့ သီချင်းသံကြားက သေနတ်သံတွေ၊ ကိုလွင်မိုးရဲ့ ငိုသံတွေက ကျွန်တော့် ခံစားချက်ကို ပိုမြင့်သွားစေတယ်။
ဧရာဝတီဟာ တကယ်ပဲ နာကျင်စွာ ညည်းတွားခဲ့တာလား? ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်း၊ အနာခံပေးဆပ်ခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောင်တော် သူရဲကောင်းတွေ အနာခံ ပေးဆပ်ခဲ့ကြတယ်။ အတိတ်တွေ မပျောက်ကွယ်ပါ၊ အသက်ရှင် မြစ်ရေလိုစီး .... ။
ကဲ ... မိတ်ဆွေတို့ရော ... ကျွန်တော့လို ခံစားလို့ရသလား? သီချင်းလေးကို နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ။
ဒီမှာလည်း download လုပ်လို့ရပါတယ်။RECO0001.MP3
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:13 PM
နအဖအစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးစစ်သားတွေ မရှိပါဘူးလို့ ဗြောင်လိမ်နေပေမယ့် တော်တော်များများ တွေ့နေမြင်နေကြရတာ အားလုံးအသိပါ။ လေ့ကျင့်ရေးတပ်တွေမှာ ပိုပြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လေးတွေကို ကြိုက်တဲ့အချိန်သွားမေးကြည့်၊ မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုရင် (၁၈) နှစ်လို့ပဲ ဖြေလိမ့်မယ်။
ကြားဖူးတဲ့ စစ်ချီသီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ ‘‘မင်းရဲကျော်စွာ တပင်ရွှေထီးပုံတည်’’ ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ။ အင်းဝဘုရင်မင်းခေါင်ရဲ့ သားတော် မင်းရဲကျော်စွာဟာ ရခိုင်ကို စစ်ချီတုန်းက သက်တော် (၁၃)နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ မွန်ဘုရင် ရာဇဓိရာဇ်နဲ့တိုက်တော့ သက်တော်(၁၇)နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
အဲဒီလိုပဲ တပင်ရွှေထီးဟာလည်း သက်တော်(၁၇)နှစ် အရွယ်မှာ ရန်သူ့နယ်မြေဖြစ်တဲ့ ရွှေမော်ဓေါဘုရားပေါ်မှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ နားထွင်းတော်မူခဲ့တယ်။
ပြောရရင်တော့ စစ်ချီသီချင်းမှာပါတဲ့ မင်းရဲကျော်စွာနဲ့ တပင်ရွှေထီးတို့ဟာ အသက်(၁၈)နှစ် မပြည့်ခင်မှာပဲ သူတို့ရဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိကို အပြည့်အ၀ တွေ့မြင်ကြရပါတယ်။
ကဲ ... နအဖစစ်တပ်မှာ ကလေးစစ်သားတွေရှိနေတာကို မပြောကြပါနဲ့။ တွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ရင်လည်း ‘‘မင်းရဲကျော်စွာ တပင်ရွှေထီးပုံတည် ဘုရင့်နောင်နဲ့ အလောင်းဘုရားတို့သည်’’ ဆိုပြီး အကျယ်ကြီး သီချင်းအော်ဆိုလိုက်ကြပါတော့ခင်ဗျား။ ။
(ပုံလေးက Google Image Search ကနေ ရှာထားတာပါ။)
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:58 PM
Labels: ဗဟုသုတ comments (5)
မှောင်မည်းနေတဲ့ တောနက်ကြီးတစ်ခုထဲမှာ ခရီးသွားတစ်စု လမ်းပျောက်နေကြတယ်။ စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ ဟိုဘက်သွားရမလို ဒီဘက်သွားရမလိုနဲ့ပဲ ညလည်းနက်ခဲ့ပြီ။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ တောမှီရဟန်းတစ်ပါးနဲ့ တွေ့ဆုံကြတယ်။ ခရီးသွားတစ်စု လမ်းပျောက်နေမှန်းသိတဲ့ ရဟန်းက လမ်းညွှန်ပြတယ်။
"ဟိုးမှာ မြင်ရလား ... အလင်းရောင်ပျပျနဲ့ မြင်ရတဲ့မြို့ ဟာ ဒကာတို့သွားမယ့် လမ်းမှန်ရောက်တဲ့ မြို့ ပဲ"
ရဟန်းညွှန်ပြရာကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မြူနှင်းမြူခိုးတွေ ပိန်းပိတ်နေလို့ ဘာမှမမြင်ကြရဘူး။
"အရှင်ဘုရား ... မြူခိုးမြူနှင်းတွေနဲ့ ပိတ်နေလို့ အရှင်ဘုရားပြတဲ့ မြို့ ကို မမြင်ကြရပါဘူးဘုရား"
ခရီးသွားတစ်စုလျှောက်တော့ ရဟန်းက မိန့်တယ်.....
"ရဟန်းက အဲဒီပိန်းပိတ်နေတဲ့ မြူခိုးတွေကို ဖောက်ပြီးကြည့်လို့ အလင်းရောင်ရှိတဲ့မြို့ ကို ညွှန်ပြနိုင်တာပါ ... အဲဒီကို ဒကာတို့ရောက်ချင်ရင်တော့ ပိတ်ကာနေတဲ့ မြူခိုးမြူနှင်းတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖောက်ထွက်ကြရလိမ့်မယ် ... ကဲ .. အချိန်တွေလင့်တော့မယ် ... သွားကြပေတော့ ဒကာတို့ ...."
ခရီးသွားတစ်စုလည်း ရဟန်းညွှန်ပြတဲ့လမ်းအတိုင်း အလင်းရောင်ရှိတဲ့မြို့ ကိုရောက်ဖို့ မြူခိုးမြူနှင်းတွေကို ဖယ်ရှားတိုးဝင်ပြီး တရွေ့ ရွေ့  နဲ့ ခရီးဆက်နေကြလေရဲ့ ။
ပိတ်ကာနေတဲ့ မြူခိုးတွေကို ထွင်းဖောက်ကြည့်နိုင်သူတိုင်း အလင်းရောင်တောက်ပတဲ့ မြို့  ပြကို မြင်ကြရမှာပါပဲ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 4:30 PM
ပေးဝေ မေတ္တာ ကရုဏာ။
ရူးသွပ် လောဘ ဒေါသမီး
ပြန်ရှင်သန်ဖို့ ကြိုးစားပါ ...
အမြန်ဆုံးနဲ့ ရောက်စေသား။ ။
(အားလုံးအတွက် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်လို့ကောင်းအောင် ကလေးကဗျာတွေလို ကာရန်လေးနဲ့ ကြိုးစားရေးထားပါတယ်။ ကျိန်ဆဲချင်ရင်တော့ တစ်ကြောင်း ပြီး တစ်ကြောင်း အစ အဆုံး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။)
ကန်လယ်မှာ လှေတစ်စင်း ရုန်းရင်းဆန်ခပ် ဖြစ်နေတယ် ...
ကလေးတွေ ကစားရင်း မာလိန်မှူး သူလုပ်မယ် ငါလုပ်မယ်နဲ့ ငြင်းခုံ ရန်ဖြစ်နေကြတာပါ...။
ကန်ကလည်းငယ်ပါတယ်၊ လှေကလည်း သေးပါတယ်။
လှေက ကလေးတွေနဲ့တင် ပြည့်ကျပ်နေပြီ။
အဲဒီအချိန်မှာ ရေကူးနေတဲ့ ကလေးစိတ်မကုန်သေးတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက် လှေပေါ်တက်လာပါတယ်...။
“ကလေးတွေ ... လှော်တက်ငါ့ကိုပေး ၊ မင်းတို့ မာလိန်မှူး ရွေးလို့ပြီးရင် ပြန်ပေးမယ်... ”
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ လှော်တက်ကိုအတင်းလုပြီး လှော်နေတော့တယ်။ လူကြီးဆိုတော့လည်း ဘာမှမပြောရဲကြဘူး။
လှေကလေးကဖြင့် သူတက်လိုက်လို့ ရေတွေစိမ့်ဝင်ပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နစ်တော့မယ်။ လူကြီးကတော့ လှော်ကောင်းတုန်း။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:12 PM
ဘယ်တော့မှ မာန်မလျှော့ဘူး။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:38 PM
Labels: ကဗျာ comments (12)
ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ခရီးထွက်ခဲ့တုန်းက ကျွန်တော့်လိုပဲ အထီးကျန်လှတဲ့ မြစ်ကျိုးအင်းကြီး တစ်ခုနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် စကားသွားပြော ကြည့်တော့ ကြေကြေကွဲကွဲနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ရင်ဖွင့်နေလေရဲ့ .....
" ကွေ့ကောက်ကြတုန်းက အတူတူကွေ့ကောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ အခုမှ သူတို့က ဖြောင့်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ထားသွားကြတယ်ဗျာ ...."
မြစ်ကျိုးအင်းကြီးခမျာ ငေးငေးမှိုင်မှိုင်နဲ့ သနားစရာကြီးကို ဖြစ်လို့။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:03 PM
နှင်းဆီပွင့်တွေအပြိုင်းအရိုင်းပွင့်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။ အဲဒီမှာ ဒီဝတ္တုရဲ့ ဇာတ်လိုက်နှင်းဆီပွင့်က တွေးတယ်....
" အင်း ... ငါဒီလို ပုံမှန်အတိုင်း ပွင့်နေလို့ကတော့ ဘာမှ ထူးခြားမှာ မဟုတ်ဘူး။ လူတွေ ဂရုစိုက်လာအောင် ငါ့ကိုယ်ငါ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကို ပွင့်ပစ်လိုက်စမ်းမယ်.... "
အတွေးအဆုံးမှာပဲ သူ့ကိုယ်သူ ၀ုန်းကနဲ ဖန်ဆင်းပစ်လိုက်တယ်....။
ရုတ်တရက် ကြီးမားလာတဲ့ နှင်းဆီပွင့်ရဲ့ အလေးချိန်ကို ပင်စည်က မခံနိုင်ဘူး။ တဖြည်းဖြည်း ကွေးညွှတ် အိ ကျ ...။
" ဟာ ... ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ? "
" သေကုန်တော့မှာပဲ လုပ်ပါဦး "
" ........ ....... ........ "
အဲဒီမှာ တခြားနှင်းဆီပွင့်တွေက (ထိတ်လန့်တကြား) ကြောက်လန့်တကြား အော်ဟစ်ကြ။ ဆူညံ ပွက်လောထသွားတယ်။
ပြီးတော့ အခြေအနေအရတဲ့ အပင်ကနေ ၀ိုင်းပြီး ဖြုတ်ချ ခြွေပစ်လိုက်ကြတယ်။
လောကကြီးမှာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပွင့်ချင်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဇာတ်လိုက်နှင်းဆီကြီးဟာ ခဏတာပဲ ကြီးကျယ်လိုက်ပြီး အကြီးအကျယ် သေဆုံးသွားရတော့တယ်။
တခြားနှင်းဆီပွင့်တွေကတော့ ပြန်လည်ထောင်မတ်လာတဲ့ ပင်စည်ကြီးမှာ ဝေေ၀ဆာဆာ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ကြီးတွေနဲ့ပေါ့။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 5:31 PM
ခပ်ညံ့ညံ့မြေခွေးတစ်ကောင်ဟာ စင်ပေါ်မှာ မျက်လှည့်ပြဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိကလှုပ်ရှားမယ့်လက်ကို မသိမသာ ငြိမ်ထားပြီး ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ဆီ ပရိတ်သတ်တွေ အာရုံပြောင်းအောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးစားနေတယ်။
ဒါပေမယ့် ပရိတ်သတ်ကတော့ အစကတည်းက မြေခွေးအကြောင်း သိပြီးသားပဲလေ။ ဘယ်သူကမှ သူ့ကို အယုံအကြည် မရှိဘူး။
မျက်လှည့်ဆရာ မြေခွေးကတော့ ပရိတ်သတ်ကို လှည့်စားပြီး ဒီဘက်အိတ်ကပ်ထဲကနေ ဟိုဘက်အိတ်ကပ်ထဲကို ပြောင်းဖို့ အတင်းကြိုးစားနေလေရဲ့။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 5:46 PM
ရွက် .. လွှင့် .. လိုက် ..။
မောင်း .. ထုတ် .. လိုက် ..။
...... လေဆန်ကို ပျံဖို့ဖြစ်တယ်
...... လေဆန်ကို ပျံဖို့ဖြစ်တယ် ...။
အာဇာနည် ရဲ့ ဓါးအတွက်
....... ငါတို့ လာနေပြီ
....... ငါတို့ လာနေပြီ .... ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:04 PM
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပို့စ်အသစ်လေးတွေကိုဖတ်ပြီး ကိုthinker က ဝေဖန်ပါတယ်။
ကိုthinker ။ ။ "ခင်ဗျားကလည်း အတုတွေများလှပါလား"
ကျွန်ုပ်။ ။ "အတုတွေများမှာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ နိုင်ငံမှာကိုက လူတွေတော်တော်များများ အတုတွေနဲ့ နေသားကျနေကြတာပဲ"
ကိုthinker ။ ။ "ဟ ဟေ့လူရ အဲလောက်တော့ မဟုတ်ဘူးထင်တယ် အစစ်အမှန်သုံးတဲ့သူလည်း တော်တော်များပါတယ်"
ကျွန်ုပ်။ ။ "ကျွန်တော် ပြောတာက အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းအတုကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆန္ဒအတုကိုပြောတာ။ ပြည်သူလူထုက သူတို့ရဲ့ဆန္ဒ အစစ်အမှန်ကို ဖော်ထုတ်ပြတော့လည်း ဖမ်းတယ်၊ ဆီးတယ်၊ ရိုက်တယ်၊ ပစ်တယ်။ ပြည်သူအများစုဟာ စစ်အစိုးရကို အလိုမရှိတဲ့ ဆန္ဒအစစ်တွေကို ချိုးနှိမ်မြိုသိပ်ပြီး ဆန္ဒအတုတွေနဲ့ နေထိုင်နေကြရတာဗျ။ သေချာတာကတော့ ပြည်သူလူထုက ပစ္စုပ္ပန်ကို စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ လက်ခံရှင်သန်နေကြရတာပါဗျာ"။
ပြောပြီး ကျွန်တော်သက်ပြင်းချမိပါတယ်။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:17 PM
ဘေးရန်ဆီးကာ .. တဲ့
ခင်ဗျားက ကင်း လုပ်တယ်။
ဒါနဲ့ လူကော ဟုတ်ရဲ့လား?
သူ့မှာ နှလုံးသားမှ မရှိတာ...။
နာရီတွေထဲ .. ကျွမ်းထိုးမှောက်ခုံ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:07 PM
မာရ်နတ်ဟာ ကမ္ဘာကိုဖျက်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုခိုင်းစေရအောင် နွားတချို့မွေးပြီး နဖားကြိုးထိုးတယ်။ တချို့နွားတွေက သူတို့ရဲ့သခင်ဟာ ကမ္ဘာဖျက်မယ့်မာရ်နတ်ဆိုတာ မသိရှာပဲ ဘုမသိဘမသိနဲ့ ကြိုးဆွဲရာ ကကြရှာတယ်။ တချို့နွားတွေကတော့ သိရက်နဲ့အလိုတူအလိုပါ။
မာရ်နတ်က ဒါနဲ့အားမရသေးတော့ တချို့နွားတွေကို သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဆီပို့ပြီး ကမ္ဘာဖျက်နည်းတွေသင်ခိုင်းတယ်။ မာရ်နတ်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေက အဲဒီနွားတွေကို လည်ပတ်ပါ ပတ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီနွားတွေက ပိုပြီးသနားစရာကောင်းတယ်၊ နဖားကြိုးအပြင် လည်ပတ်ပါ ပါတော့ မာရ်နတ်က ပိုခိုင်းလို့ကောင်းတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကမ္ဘာဖျက်မာရ်နတ်ရဲ့ နွားတွေ... နွားတွေ... များလာ။ ကမ္ဘာကြီးလည်း ပျက်သထက် ပိုပိုပျက်လာတော့တာပဲ။ သြော် ... အနိစ္စ .. ဒုက္ခ .. အနတ္တ ...။ ။
Labels: ဝတ္တုတို comments (5)
အမှားကို ထောက်ပြပေးသူတွေကိုရော၊ ဝေဖန်အကြံပြုပေးသူတွေရော၊ မေတ္တာပို့ကြသူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ... ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှပြန်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြောကြသလို နာမည်ကြီးချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ ကံချွန်လို ကြားဖူးနားဝ ဟာသပုံပြင်လေးပြောကြည့်တာပါ။ သိကြသူတွေ သိသလိုတွေးပြီး သိကြပါစေ။ မသိသူတွေ မသိသလိုနေကြမှာပါ။ သိရက်နဲ့မသိချင်ယောင်ဆောင်နေသူတွေကိုတော့ ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 4:10 PM
Labels: ဗဟုသုတ comments (8)
ဇာတ်ဆရာရဲ့အော်သံအဆုံးမှာ ကျွန်တော်ဇာတ်စင်ပေါ်ကိုအလိုလိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်မှာ အလှည့်ရောက်တာအကောင်းဆုံးပဲ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ စကားလုံးတွေအပြည့်အသိပ်နဲ့ ပေါက်ကွဲထွက်လာတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ကျွန်တော်ပြောချလိုက်တယ်။
".... ...... ..... ....... ...."
ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော့်ပါးစပ်က ဘာအသံမှထွက်မလာခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော် အံ့ဩသွားတယ်။ ချက်ချင်းပဲ ဇာတ်ဆရာကို လှည့်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်သိလိုက်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်သရုပ်ဆောင်နေရတာက အ အ ခန်းလေ။ မွန်းကျပ်မှုတွေနဲ့ ကျွန်တော်မောလာတယ်။
"နောက်တစ်ခန်းအတွက်အသင့်ပြင်ထား" ဆိုတဲ့ ဇာတ်ဆရာရဲ့အသံနဲ့အတူ ကျွန်တော် ဇာတ်စင်နောက်ကို ရောက်ခဲ့တယ်။ နာကျည်းလိုက်တာ။ နောက်အခန်းတွေဘယ်လောက်များများ ကျွန်တော် အ ချင်ယောင်ဆောင်နေရဦးမှာလဲ???။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:55 PM
တခါက မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်က ၀ါရင့်ဆရာကြီးတစ်ယောက် DSTA လို့ခေါ်တဲ့ တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကို တာဝန်ကျလို့ပြောင်းသွားရသတဲ့။ ဒီလိုနဲ့သင်ရင်းပြရင်း စာမေးပွဲတွေပြီးရောဆိုပါတော့။ အဲဒီမှာ ဆရာကြီးစစ်ရတဲ့အဖြေလွှာတွေက အောင်မှတ်ရတာ တစ်ယောက်မှမရှိဘူးဆိုပဲ။ ဆရာကြီးကလည်းဝါရင့်ဆိုတော့ ဘာရမလဲ အကုန်ချပစ်တာပေါ့။ တော်လိုက်တဲ့ DSTA ကျောင်းသားတွေနော်။
အဲဒီအကြောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးကြားသွားတော့ ဆရာ့ကိုခေါ်ပြောသတဲ့။ ကျောင်းသားတွေစာမေးပွဲကျတဲ့ ကိစ္စမှာ အကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့၊ တစ်ခုက ကျောင်းသားတွေညံ့လို့၊ နောက်တစ်ခုက သင်တဲ့ဆရာညံ့လို့၊ DSTA ကျောင်းသားတွေကတော့ selection ရွေးထားလို့ ညံ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပဲ။ ဒါနဲ့ ၀ါရင့်ဆရာကြီးလည်း စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ကျောင်းက ထွက်စာတင်ခဲ့သတဲ့ဗျာ။
တော်လိုက်တဲ့ DSTA ကျောင်းသားတွေနော်။ MTU က တကယ့် ၀ါရင့်ဆရာကြီး စိတ်ညစ်သွားအောင်ကို တော်ကြပုံများပြောပါတယ် .... တကယ်။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 8:20 PM
Labels: ဗဟုသုတ comments (22)
"ဟေ့ကောင် မင်းသတင်းစာက ဇောက်ထိုးကြီးဖြစ်နေတယ်လေ ... ဘယ်လိုလုပ်ဖတ်လို့ရမှာလဲ?"
"မင်းဘာသိလို့လဲ? ငါဖတ်နေတာ အစိုးရသတင်းစာဟ .. ဇောက်ထိုးဖတ်မှ အမှန်အတိုင်းတွေသိရတာ"
နောက်တစ်ယောက်လည်းကြည့် ... ခုံပေါ်မှာဇောက်ထိုးကြီး TV ကြည့်နေတယ်။ သူကလည်းပြောတယ် ...
"တပ်မတော်နေ့ဂုဏ်ပြုဇာတ်ကားကြည့်နေတာကွ" တဲ့ ... ကောင်းရော။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 8:06 PM
ဘယ်တော့မှ ... ရောက် .. မှာ .. လဲ?
အမှောင်မှာ အိပ်ပျော်ကြတုန်းပေါ့။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:48 PM
Labels: ဝတ္တုတို comments (1)
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 4:12 PM
Labels: ကဗျာ comments (1)
"အရာအားလုံးကိုလောင်ကျွမ်းပြာကျစေခဲ့တဲ့မီးဟာလောကမှာသူသာဘုရင်ဆိုပြီး မာန်တွေတက်နေတာပေါ...အဲဒီအချိန်မှာရေကိုသူတွေ့လိုက်တယ်.. ဒေါသတကြီးနဲ့မီးဟာရေကို ပြာကျသွားအောင်ဆိုပြီး ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ကျွမ်းပစ်တာပေါ့... ဒါပေမယ့် မီးဟာ နောက်ဆုံး ရေကိုတော့ အရှူံးပေးလိုက် ရတော့တာပါပဲကွယ်"
ကျွန်တော့်ပုံပြင်အဆုံးမှာ ငြိမ်သက်နားထောင်နေတဲ့သား ကမေးပါတယ်...
"မီးက ရေကျ ဘာလို့မနိုင်တာလဲဟင် ဖေဖေ?"
"မီးကဒေါသကြီးပြီးပူပြင်းတယ်... ရေက တည်ငြိမ်အေးချမ်းတယ်..မှတ်ထားသား ... လောကမှာ ပူပြင်းတောက်လောင်မှုတွေက ဘယ်လောက်ပဲအနိုင်ရနေပါစေ.... နောက်ဆုံးကျရင်တော့ အေးချမ်းငြိမ်သက်နေသူကို အရှုံးပေးသွားရမှာပါ..."
စကားအဆုံးမှာ ကျွန်တော်မောသွားတယ်။ သားကတော့ ဘာအပူအပင်မှမရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့ အိပ်ပျော်သွားလေရဲ့။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 3:46 PM
ကျွန်တော်အနိုင်ရလုဆဲဆဲ.. ကျွန်တော့်နောက်ကျောကိုဓါးတစ်လက်စိုက်ဝင်သွားတယ်။ နှလုံးသားတည့်တည့် ကိုထိုးစိုက် ချလိုက်တဲ့ဓါး...။
နတ်ဆိုးတွေရဲ့ ရယ်မောသံနဲ့အတူ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရန်သူ မြေခွေးက ကောက်ကျစ်စွာပြုံးလို့ ...။
ကျွန်တော် အသိနောက်ကျစွာပဲ လဲကျ သေဆုံး ။
ဒီပွဲကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့ တစ်ယောက်တည်းသောပရိတ်သတ်ကဖြေးညင်းလေးသွဲ့စွာ ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့ ထွက်ခွာသွားလေရဲ့။ သူ့နှုတ်က ခပ်တိုးတိုးပြောသွားတယ် ...
"လူကောင်းကလေးရယ်...မင်းဘယ်လောက်ပဲတော်နေပါစေ...အစကတည်းကကောက်ကျစ်ယုတ်မာ တတ်တဲ့မြေခွေးဘက်မှာ နတ်ဆိုးတွေကူညီနေတော့ မင်းပဲရှုံးမှာပေါ့ကွယ်...ငါလည်းလူကောင်းတွေအတွက် ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့တာအတော်ကြာခဲ့ပြီလေ..."
ခေါင်းရမ်းရင်း ခပ်တိုးတိုးညည်းတွားတဲ့အဖိုးအိုကတော့ အမှန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 3:45 PM
အရှိန်နဲ့ပြေးလာပြီး ကျွန်တော့်ကို အသားလွတ်ဝင်တိုက်တယ်။
သူရောကျွန်တော်ပါလဲကျ။ ဒေါသတကြီးနဲ့ ကျွန်တော်ဆဲမလို့ ကြည့်လိုက်တော့... ကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုဝင်တိုက်တာ လူမဟုတ်ပဲ ပါးစပ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်နေတယ်။
"ဆောရီးဗျာ... နောက်ကကျွန်တော့်သခင်လိုက်လာလို့ ထွက်ပြေးနေတာပါ ..."
ကြည့်လိုက်တော့ဟိုးခပ်ဝေးဝေးမှာ ဒီဘက်ကိုပြေးလာနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။ အဲ... ဟုတ်တယ်ဗျ ...သူ့မှာ ပါးစပ်မပါဘူး။
"နေပါဦး... မင်းကဘာလို့လူပေါ်မှာမနေပဲထွက်ပြေးနေ ရတာလဲ ?"
ကျွန်တော်မနေနိုင်လို့ မေးမိတော့ ပါးစပ်ကြီးက ပြန်ဖြေပါတယ် ...
"အို... အဲဒီလူပေါ်မှာမနေချင်တော့ပါဘူးဗျာ ... ဘယ့်နှယ် ...
လူကဖြင့်အဖြစ်မရှိပဲနဲ့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေလျှောက်ပြောနေတာ..ကြာတော့သူမရှက်ပေမယ့်... ကျွန်တော်ရှက် လာပြီဗျ"
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 3:44 PM
Labels: ဝတ္တုတို comments (3)
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 3:41 PM
ပြည်သူတွေ ရင်ထဲက အမုန်းမီးဟာ
ရတနာပုံဈေး မီးထက်ပို ပူပြင်းတယ်။
ဘယ်တော့မှ စိတ်ဓါတ်ကျ မသွားတဲ့
ဘယ်တော့မှ ယုံကြည်ချက် ပျက်စီးမသွားတဲ့
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေရှိတယ်။
တူညီစွာ ဆန္ဒပြုပါတယ်လေ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 3:34 PM
Labels: ကဗျာ comments (0)
ထိုလူက ကင်းမြီးကောက်ထောင်လျက်နှင့်ပင် ပြန်ဖြေ သည်...
"အမြဲတမ်းခေါင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးကိုမကျေနပ်လို့ဗျ... ခုတော့ ဒင်းဘာတတ်နိုင်သေးလဲ ...ကျွန်တော့် ခြေထောက်အောက်မှာ ရောက်နေပြီလေ.."
"..... ..... ..... ....."
"အင်း ... ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားဟာကဇောက်ထိုးကြီးဗျာ"။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 3:32 PM
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 3:31 PM
အဲဒီမှာ ဗဟို ဆိုတဲ့ကောင် ဒီစက်ဝိုင်းကြီးကို သူတည်ဆောက်လိုက်တာဆိုပြီး မာန်ဟုန်တွေဝင့်လို့။ စက်ဝိုင်းအလည်ခေါင်တည့်တည့်မှာ မိန့်မိန့်ကြီးပြုံးနေတယ်။
ဗဟို ဆိုတဲ့ကောင်က အငြိမ်မနေပဲ ခြေဆော့လက်ဆော့နဲ့ စက်ဝိုင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်တော့ သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီး အကျဉ်းချထားသလိုကြီး ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။ ဘယ်မှလည်းထွက်သွားလို့မရအောင်ပတ်ပတ်လည်စည်းတားခံ ထားရသေးတယ်။
ကျွန်တော့်မှာတော့ သူ့ကိုကြည့်ပြီး သနားလိုက်တာ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 3:13 PM